Imaginbank neMarca vanogashira makuru ekuvandudza munguva yakareba | IPhone nhau
Imaginbank neMarca vanogashira makuru ekuvandudza munguva yakareba
Imaginbank ihofisi yako panharembozha yako, kusvika padanho rekuita chero basa rebhangi kubva mukushandisa kwaro kana nekubata vatengi kubva kune yako yaunoda pakarepo mameseji system. Muchidimbu, sekushandisa sekushanda sezvazviri, zvinoda kugara zvichivandudzwa uye nekuvandudzwa kutsva, nekudaro, tinotaura ndedzipi nhau idzo Imaginbank inopa neiyi yazvino yekuvandudza yakatangwa muApple App.
Kune rumwe rutivi, Brand yakachinja zvachose dhizaini yekushandisa, ichiita kuti ive yakajeka uye yakapusa, ichideredza mashandiro uye nekuvandudza nzira yatino famba nayo. Idzi ndidzo nhau dzese.
NeImaginbank takatarisana neiyo yechokwadi nhare mbozha yatinogona kuwana muApple App. Neizvi isu tinoreva kuti Imaginbank iri hofisi yako yemahara, kusvika padanho rekuita basa ripi neripi rebhengi kubva mukushandisa kwayo kana nekutaurirana nebasa revatengi kubva kune yako yaunoda mameseji masisitimu.
• Iwe unogona ikozvino kugadzira chinetso uye chengetedza zvishoma nezvishoma kuzadzisa zviroto zvako.
• Iko kunyorera kuri kukurumidza kupfuura pakutanga. Ticharamba tichivandudza 🙂
• Unogona kushandura nhamba yako yepassword kuita yearufabheti
• Zvirinyore kuisa account account / IBAN paunenge uchichinjisa (unogona kuteedzera nekunamatira)
• Uye kumwe kuwedzera kuita
Brand inoshandura zvachose dhizaini yayo uye inounza kwatiri nhau
BRAND - Yemitambo dhayarivakasununguka
Iyo Marca app haisati yambozivikanwa nekuita uye kushandiswa. Zvisinei, ivo pakupedzisira vakasarudza kuwana dhizaini yeEl Mundo, rimwe pepanhau reboka rimwe chetero, nokudaro richizadzikisa nyore uye zvine hungwaru interface yekufambisa. Kunyangwe pamusoro pezvose, chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti izvozvi ine dhizaini yeiyo iPad. Idzi ndidzo nhau:
- SITSITSI YEMAHARA YEMAHARA: Iye zvino zvave nyore kuwana dzese nhau dzemitambo yese iyo MARCA yaunokupa.
- REKUPEDZISIRA Maminiti: Kuwana nekungotarisa kune dzichangoburwa nhau dzichangobva kugadzirwa muMARCA, miniti neminiti yemutambo.
- NEW TV AGENDA: Nemitambo yese yemitambo paterevhizheni vhiki rega rega.
- ZViziviso Yakagadzirirwa: Sarudza timu yako yaunofarira, makwikwi kana mutambo kuti ugamuchire zvibodzwa, mhedzisiro uye nhau.
- VERENGA PASHURE: Sarudza nhau dzausingakwanise kuverenga panguva iyoyo kuti uverenge gare gare, kunyangwe isipo.
- Iye zvino zvakare inowanikwa iPad.
- Kugadziridzwa mukugadzikana uye kuyerera kwechishandiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Imaginbank neMarca vanogashira makuru ekuvandudza munguva yakareba
Jony Ive nyeredzi mune yazvino vhidhiyo nezve bhuku "Yakagadzirwa naApple muCalifornia"
Iyo 1Password app inovandudzwa kuti iende yemuno paApple Watch